On1.click | ငှက်ညိုလုံးလည်ဖြူ
... လုံးလည်ဖြူ ကို ဥရောပတိုက်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ ဗဟိုအာရှ၊ အိန္ဒိယတိုက်င...
ငှက်ညိုလုံးလည်ဖြူ (Cinclus cinclus) ကို ဥရောပတိုက်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ ဗဟိုအာရှ၊ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်များတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းငှက်သည် နော်ဝေးနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားငှက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2016). "Cinclus cinclus". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
↑ Brewer၊ David (2001)။ Wrens, Dippers and Thrashers။ Pica Press။ ISBN 978-1-873403-95-2။
↑ Norges nasjonalfugl fossekallen (in no)။ Norsk Rikskringkasting AS (22 April 2009)။